Uchwepheshe We-Semalt: Uhlu Lokungabanjwa Lokudluliselwa
Enye yezindaba ezivame kakhulu ekuhlaziyweni kwe-analytics ukuthi abantu abawutholi umqondo wohlu lokwehliswa kokudluliselwa kokubhekisa nokusebenzisa kahle. Okokuqala, sidinga ukwazi ukuthi lolu hlu lokubanjwa lokudluliswa luyiliphi. Lapho i-Google iqalise inguqulo yakamuva ye-Google Analytics, ithi inhlawulo yokubanjwa kokudluliselwa ifakiwe ku-Analytics. Kulula kuwo wonke umsebenzisi ukuthola lolu hlu; kufanele utholakale kuzilungiselelo zendawo. Okokuqala, kufanele uhambisane nesigaba somlawuli bese uya kolwazi lokulandela lapho uhlu lokubanjwa lokudluliselwa lukhona khona. Kufanele uchofoze inkinobho yokukhishwa kokudluliselwa bese uchofoza inkinobho yokudala kwesizinda.
U-Nik Chaykovskiy, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, ithi kunenqwaba yezinkinga ezingaxazululwa ngohlu lokungabikho lokudluliselwa. Ngakho sebenzisa ukuxazulula izinkinga ezilandelayo:
Ukuzimela ngokwakho kungenye yezindaba ezivelele nakakhulu ku-Google Analytics. Ukuxazulula le nkinga, kufanele uchofoze umbiko wokudlulisela bese uthola iwebhusayithi yakho lapho. Lapha ungakwazi ukulungisa ama-analytics kanye nokuhlolwa kwama-auditor njengokwezimfuneko zakho.
Uma kuziwa ekusebenziseni amathuluzi esithathu, kufanele ufeze imisebenzi eminingi. Uma uzama ukulungisa i-PayPal, i-Freshdesk, ne-Eventbrite ngewebhusayithi yakho, qinisekisa ukuthi imifanekiso nezixhumanisi zabo kuhlanganisiwe kahle, futhi i-credit iya ngqo ku-akhawunti yakho yomuntu siqu. Ukuguqulwa akufanele kubalwe kumawebhusayithi eqembu lesithathu. Ngokwesibonelo, uma unayo iwebhusayithi yezokuphathwa kwemicimbi noma izithombe, kufanele uzame i-Eventbrite futhi ubhalisele i-akhawunti yakho. akhawunti ngokushesha. Uma izivakashi zesayithi lakho zizama ukubeka i-oda, zizothumela kalula imali kule akhawunti, ekugcineni ezofika ebhange lakho.
Kusemthethweni ukusebenzisa uhlu lokubanjwa lokudluliselwa, ngaphandle kwalo, awukwazi ukuthola izivakashi ezingcono zewebhusayithi yakho. Uma ungafuni ezinye izixhumanisi ukudala ithrekhi kusayithi lakho, kufanele ukhubaze le nketho noma ungafaki isizinda ohlwini lwakho lokungabikho lokudluliselwa. Ake sithi ezinye izivakashi ziza kuwebhusayithi yakho nge-social media, Twitter noma Facebook, futhi ufuna ukuba zihambise kumawebhusayithi eqembu lesithathu. Kulokhu, kuzodingeka uhlanganise uhlu lokubanjwa lokudluliselwa ukuze iseshini entsha iqalwe ngesikhathi.
Uhlu Lokungavumeli Ukudluliselwa Kungenza umkhawulo wakho ube nomkhawulo kanye nenombolo yezivakashi. Uma ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zezivakashi eza esizeni sakho nokuthi ziyini imithombo yazo, kufanele usethe amakhodi wokulandelela esizinda esiphezulu bese uwafaka kumakhasi ahlukene ewebhu kuwebhusayithi yakho. Kuyinto engavamile uma iwebhusayithi ehlwini lokudluliswa kokudluliselwa ngeke ikuvumele ukuthi ubone ukuthi yiluphi uhlobo lwezivakashi oluza kuwebhusayithi yakho. Ungakwazi ukulandelela nokurekhoda imisebenzi yabo futhi ngaleyo ndlela uvimbele i-IP engaziwa noma engozini ukuze ikuthumelele.
Isikhathi esithile, ungabona ukuthi iwebhusayithi yakho ithola izivakashi, kodwa ukufika kwabo kuzomiswa uma ulungisa izilungiselelo futhi labo bantu abasoze bafika kusayithi lakho.